किन हुन्छ युटीआइ? के हुन् यसका घरेलु र आयुर्वेदिक समाधानका उपाय? – Health Post Nepal
२०७९ वैशाख २६ गते १३:३६
महिलामा पिसाबको संक्रमण आमसमस्या हो। यद्यपि पुरुषहरु र बालबालिका पनि यसबाट प्रभावित भइरहेका हुन्छन्। एक अनुमानअनुसार विश्वभर बर्सेनि करिब १५ करोड मानिसहरु युटीआइबाट पीडित भइरहेका हुन्छन्।
युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन (युटीआइ) यस्तो समस्या हो, जसले मुत्रमार्गलाई प्रभावित पार्छ। यो समस्या दिसामा हुने ‘ई कोलाइ’ ब्याक्टेरियाका कारण हुन्छ। यद्यपि केही स्थितिमा फंगस र भाइरसका कारण पनि युटीआइको समस्या हुन्छ।
पिसाबको संक्रमण हुँदा चिलाउने, ज्वरोजस्ता समस्या देखा पर्छ। यसको समाधानका रुपमा चिकित्सकहरुले एन्टीबायोटिक्स खाने सल्लाह दिन्छन्। साथै केही घरेलु उपायबाट पनि यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।
युटीआइ हुँदा पिसाब गर्दा समस्या हुन्छ। कतिपय अवस्थामा कन्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। तर यसो गर्नु राम्रो हुन्न। पिसाबलाई सामान्य रुपमै आउन दिनुपर्छ। यस्तै, पिसाबलाई कहिल्यै पनि रोकेर राख्नुहुन्न। यसो गर्दा पनि मुत्रमार्गमा ब्याक्टेरिया सिर्जना भएर संक्रमण फैलने सम्भावना हुन्छ।
असन्तुलित खानपान या जीवनशैली, ब्याक्टेरियाको संक्रमण युरेथ्रा या भल्भामा पुग्दा, यौन सम्बन्धका क्रममा ब्याक्टेरियाको सम्पर्कमा आउँदा, शौचालयको फोहोर पानीको सम्पर्कमा आउँदा युटीआइ हुनसक्छ।
युटीआइबाट बँच्न घरेलु र आयुर्वेदिक उपाय
यदि बारम्बार युटीआइको समस्या हुने गरेको छ भने शरीरमा पानीको कमीका कारणले पनि हुनसक्छ। यसबाट बँच्न बढीभन्दा बढी पानी पिउनुपर्छ। विशेषज्ञका अनुसार पानीको कमीका कारण मुत्रमार्गमा जलन र चिलाउने हुन्छ। यो गम्भीर समस्या हो। यसैले यसको समाधानका लागि कम्तीमा दैनिक ८–१० गिलास पानी पिउनुपर्छ।
यस्तै, हरेक मौसममा उपलब्ध फलफूलको रस पिउनुपर्छ। गर्मीमा नरिवल पानी, कागती पानी या उखुको रस पिउन सकिन्छ। यिनले मुत्रमार्गबाट खराब पदार्थ बाहिर निकाल्न मद्धत गर्छ।
युटीआइबाट पीडित व्यक्तिले बेल, अमला या लालीगुराँसको रस पिउनुपर्छ। यिनीहरु कैयौं महत्वपूर्ण पोषक तत्वबाट भरपुर हुन्छन्। भिटामिन, खनिज, इलेक्ट्रोलाइट या एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ।
आयुर्वेदमा लसुनलाई पनि युटीआइविरुद्ध प्रभावकारी मानिन्छ। नियमित रुपमा काँचो लसुन सेवन गर्नाले युटीआइको समस्या समाधान गर्न मद्धत पुग्ने बताइन्छ। यसका लागि दैनिक दुई या तीन पोटी लसुन बिहान खाली पेटमा सेवन गर्नुपर्छ।
पुदीनाको चिया खान सकिन्छ। पुदीनामा युटीआइका लागि कारक मानिएको ब्याक्टेरिया इ कोलाइविरुद्ध काम गर्ने गुण हुन्छ। पुदीनाको पातमा जीवाणुरोधी गुण हुन्छ, जसले युटीआईमा फाइदा पुर्‍याउँछ।
यसका अतिरिक्त युटीआइको समस्याबाट पीडितहरुले प्रशोधित या जंकफूड खानबाट बँच्नुपर्छ। नियमित रुपमा शारीरिक अभ्यास गर्नुपर्छ। तर तत्काल नुहाउनु हुन्न। दैनिक कम्तीमा पनि ७ घण्टा निदाउनुपर्छ। युटीआइबाट बँच्नका लागि जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
डिस्क्लेमरः यो जानकारीमात्र हो। कुनै स्वास्थ्य समस्या भएमा सम्बन्धित चिकित्सकको सहयोग लिनुहोला।